Public Kura | » कस्तो बच्चाहरुलाई निमोनिया हुने जोखिम बढी हुन्छ ? कस्तो बच्चाहरुलाई निमोनिया हुने जोखिम बढी हुन्छ ? – Public Kura
निमोनिया के हो: निमोनिया भनेको श्वासप्रश्वास सम्बन्धि संक्रमण हो र यसले फोक्सोमा असर गर्छ। निमोनिया भएको अवस्थामा फोक्सोभित्र भएका स-साना हावाका थैलीहरुमा तरल पदार्थ भरि श्वास फेर्न कठिनाई भई शरीरमा आवश्यक अक्सिजनको मात्रामा कमी हुन जान्छ। ५ वर्ष मुनिका बच्चाहरुको मृत्युको प्रमुख कारण निमोनिया हो।
निमोनिया के कारणले हुन्छ?
निमोनिया कसरी सर्दछ?
मुख्यतया बच्चाहरुको नाक र घाँटीमा रहेका संक्रामक जिवाणु वा किटाणुहरु श्वासको माध्यमबाट फोक्सोसम्म पुगि निमोनिया गराउन सक्दछन्। संक्रमित व्यक्तिहरुले हाछ्यूँ गर्दा वा खोक्दा थुक र सिंगानको छिट्टाबाट सर्न सक्दछ।
कस्तो बच्चाहरुलाई निमोनिया हुने जोखिम बढी हुन्छ?
निमोनिया भएका बच्चाहरुमा अन्य स्वास्थ्य समस्याहरु जस्तै झाडापखला, दादुरा, औलो, कुपोषण समेत देखा पर्न सक्छ। यदि बच्चामा माथिको चिन्ह वा लक्षणहरु देखा परेमा तुरुन्तै नजिकको स्वास्थ्य संस्थामा लैजानु पर्दछ।
निमोनियाको उपचार तथा रोकथाम कसरी गर्ने?